လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့ Covid-19 ရောဂါပိုးကူးစက်မှုတွေက တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ များပြားလာပြီး သေဆုံးလူနာတွေလည်း တိုးမြင့်လို့လာပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Covid-19 ကတော့ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ သာမာန်လူ၊ နာမည်ကြီး ဘာဆိုဘာမှ မရွေးဘူးဆိုတဲ့အတိုင်း ပရိသတ်သိတဲ့ နာမည်ကြီးဆယ်လီတွေလည်း ရောဂါကူးစက်ခံရမှုတွေရှိနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း နာမည်ကြီးရုပ်သံလိုင်း MRTV-4 က အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ ကိုဇော်ဝင်းနိုင်ကတော့ Covid-19 Positive ဖြစ်ပြီး သူကြုံတွေ့ခဲ့ရသမျှကို အခုလိုပဲ ပြောလာပါတယ်။
“ကျွန်တော် ဖောင်ကြီး Q center မှာရောက်တာ ဒီနေ့နဲ့ဆို (၈)ရက်ရှိပါတယ်။ ဒီမရောက်ခင်ကျွန်တော်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ရောဂါခံစားမှုနဲ့ သတိပြုစရာတချို့ကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ Covid 19 ရောဂါဖြစ်တဲ့ပုံစံကတော့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူကြပါဘူး။ ကျွန်တော်ဖြစ်တာကတော့ဆိုးတဲ့အထဲမှာပါတယ်လို့ပဲဆိုရမှာပါ။ အဖျားတက်၊မော၊ကြပ်တာပေါ့နော်။ အနံ့ပျောက်ပြီးအဲဒါတွေစဖြစ်တာပဲ။ အရင်လဲအဆုတ်မကောင်းတာအခံရှိတော့ မောတာ၊ကြပ်တာကို ပုံမှန်လောက်ပဲထင်တာ။ လူကခေါင်းကလဲမာတော့ သက်သာသွားမှာဆိုပြီးကြိတ်ခံနေသေးတာ။ oxygen level တိုင်းကြည့်တော့ 90 အောက်ကျနေတာနဲ့ ပရဟိတကူညီရေးအသင်းကို ဖုန်းဆက်ပြီးညတွင်းချင်းဆေးရုံတက်လိုက်လို့ အခုလောက်အသက်ရှိသေးတာပါ။ လတ်တလောထိ oxygen level ပြည့်အောင်လုပ်နေရတုန်းပါပဲ။”
“အဲ့မှာပြောချင်တာနဲ့သတိပြုစေချင်တာရှိပါသေးတယ်။ ဆေးရုံကနေ ဖောင်ကြီး Q Center အရောက်မသေရုံတမယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးပါ။ ကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့ဆေးရုံက (စံပြဆေးရုံကြီး) ပါ။ ဆေးရုံကို ည ၁၂ ကျော်လောက်ရောက်တော့ အဲကဆရာဝန်က စိတ်မရှည်သလိုနဲ့အရင်စစ်မေးပါတယ်။ သူမေးတာတွေဖြေပြီး oxygen level တိုင်းတော့ 88 ဆိုတော့ oxygen ပေးစရာ မလိုဘူးလုပ်ပြီး နေဖို့နေရာပေးပါတယ်။ ပရဟိတကူညီရေးကားပေါ်မှာ oxygen ရှူခဲ့ရတော့ ပထမတော့နည်းနည်းသက်သာတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ချပေးတဲ့နေရာမှာoxyengမပါဘဲ နေနေရင်းမခံနိုင်တော့တာနဲ့ထွက်ပြီး အသက်ရှူအရမ်းကြပ်လာလို့ပါ လို့ထွက်ပြောရပါတယ်။ ဒါတောင်ထွက်လာလို့တဲ့အော်ငေါက်သေးတာ။ မထွက်လို့လဲလာကြည့်မယ့်လူတစ်ယောက်မှမရှိပဲနဲ့။ အဲ့ညကတော့ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်သွားပါတယ်။ မနက်ကျ swab test စစ်ရပါတယ်။ နောက်တစ်ရက်ကျ result ကတန်းသိရတာပါပဲ။ Positive တဲ့။ အခန်းထဲမှာ လူနာ (6)ယောက်ရှိတာ (4)ယောက် Positive ပါတယ်။ အဲ့မှာစတွေ့တော့တာပါပဲ Positive လဲဆိုတော့အကုန်ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် oxygen ကုန်လို့တောင်းလို့လဲခုလာမလိုလိုတော်ကြာလာမလိုလိုနဲ့လာကိုမလာတော့တာ။ ရောဂါကူးမှာကြောက်တာစာနာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုအ‌ခြေအနေမှာ covid လူနာတွေရောက်ရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုပြီး system မလုပ်ထားတာလားဘာလားတော့မသိဘူး။ တိုးချဲ့တွေလုပ်နေတာတော့အများကြီး။ အဲ့ဒီ စံပြဆေးရုံက ဆရာဝန်တွေကော၊ ဆရာဝန်မတွေကော ဆေးကုဖို့ထက် ဆေးဖြန်းဖို့ပဲလုပ်နေကြတာဗျာ။ အဲဒါဆိုလဲအိမ်မှာပဲနေတာမဟုတ်ဘူးဗျာ”
“ပြီးတော့ဖောင်ကြီးဖို့ပို့စီစဉ်ကြတော့တာပဲ။ အဲ့မှာစံပြဆေးရုံက တာဝန်ခံဆရာဝန်ကဖုန်းဆက်ပါတယ်။ အဓိကဆက်တာ ဖောင်ကြီးကို information ပို့ဖို့နာမည်မေး၊ဘာမေးပေါ့ ကိုယ်ကလဲ oxygen ပိုက်ကဖြုတ်လို့ကိုမရတော့ အားကိုးတကြီးနဲ့ ဆရာရယ် ကျွန်တော်အသက်ရှူကြပ်နေလို့ oxygen လေးရှူပြီးဖြစ်ဖြစ်သွားလို့ရအောင် စီစဉ်ပေးပါအုံးနော် လို့အကူညီတောင်းရတာပေါ့။ ရွှန်းရွှန်းဝေပြန်ပြောပါတယ် စီစဉ်ပေးပါ့မယ်တဲ့! ကိုယ်လဲစိတ်ချလက်ချပေါ့။ ညနေလဲရောက်ရောကားရောက်ပြီ ထွက်တော့ဆိုပြီးမောင်းထုတ်တော့တာပါပဲ။ဒါမျိုးကျနောက်ကနေတောက်လျှောက်အုပ်လိုက်ကြီး လူ‌ခြေ‌ထောက်နားတွေထိပါဆေးဖြန်းပြီးလိုက်ပို့တာဗျာ။ ကိုယ်လဲသိတော့သိလိုက်တယ် ဘာ oxygen မှလဲရှူဖို့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ တော်တော်လဲအသက်ရှူကြပ်နေပီ။ ကားမြင်တော့ပိုကြပ် YBS ကားပေါ်မှာ အကုန်လုံကိုစုပြီးဝက်တင်သလိုတင်ထားတာ ထိုင်စရာနေရာတောင်မရှိတော့ တင်စရာရှိတာတင်ပြီး မတ်တပ်လေးရပ်မှီနေပြီး စိတ်မလွှတ်သွားအောင် အသက်ကိုပုံမှန်ထိန်းပြီးမနည်းရှူနေရတယ်။ အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းတွေအရင်ကလုပ်ထားတာကိုလဲကိုယ့်ဘာသာကျေးဇူးတင်မိတယ်။ ကံကောင်းချင်တော့အန်တီကြီးတစ်ယောက်က ကြပ်နေမှန်းသိလို့နေရာဖယ်ပေးလို့ ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်ပြီးလိုက်လာရတယ်။ ဖောင်ကြီးကို။ oxygen level တိုင်းကြည့်တော့ 68 လောက်ဖစ်နေပီ!! မသေတာကံကောင်း”
“ဖောင်ကြီးနားရောက်တော့ Q Center ကတာဝန်ကျဆရာဝန်ကဖုန်းဆက်ပြီး ရောဂါအခြေနေကြိုမေးတော့ ကျွန်တော်အသက်ရှူကြပ်နေတဲ့အကြောင်းပြောတော့ ဆရာဝန်ကအံ့ဩပြီး! ဘယ်လိုလိုက်လာလဲတဲ့? ဒီတိုင်းပဲလိုက်လာရတာလို့ပြောတော့ ဒီဘက်ကိုလဲအသက်ရှူကြပ်တဲ့သူပါတယ်ဆိုပြီးအကြောင်းမကြားထားဘူးတဲ့ ဪ စံပြဆေးရုံကဖုန်းဆက်မေးတဲ့ဆရာဝန်ကိုသိချင်လိုက်တာ။ ဖောင်ကြီးရောက်တော့ Center ထဲဝင်ဖို့ကားကအထဲထိမရောက်တော့ထိပ်ကနေလမ်းလျှောက်ရတယ်။ အဝေးကြီးမဟုတ်ပေမယ့် ဆင်းလိုက်တာနဲ့ဘယ်လိုမှမခံနိုင်တော့ဘူး တလမ်းလုံးလည်းကြပ်လာတာဆိုတော့ ဟတ်ထိုးကိုလိုက်နေတာပဲ အသက်ကိုမနည်းရအောင်ပြန်ရှူရတာ။ မျက်လုံးပါပြာပြီးသေပီထင်တာ။ Center ထဲမနည်းအားတင်းဝင်ပြီး အထဲရောက်တာနဲ့ လိုအပ်တဲ့ဆေးတွေထိုးပေးပြီး လိုတာအကုန်လုပ်ပေးကြပါတယ်။ Q center တွေကတော့ ဒီလူနာတွေအတွက် system ချထားပြီးသားဆိုတော့ နေရတာအဆင်တကယ်ပြေပါတယ်။ ဆေးစစ်တာကအစသေချာလေးကို ဂရုစိုက်လုပ်ပေးပါတယ်။ကျေးဇူးလဲအထူးတင်ပါတယ်🙏”
“ဒါကြောင့် ကျွန်တော်လိုမဖြစ်ရအောင် အနံ့ပျောက်၊အဖျားအရမ်းတက်၊ကြပ်မောပြီဆိုရင် ဆေးရုံကို မြန်မြန်ကျော်ပြီး Q Center ကိုမြန်မြန်ရောက်အောင်ပြေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ် (တခြားဆေးရုံတွေတော့မသိပါ စံပြဆေးရုံကြီးကတော့လှန့်သွားပါပီ) နောက်ပြီး ‌ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရမ်းမစိုးရိမ်ရဘူးထင်လို့ oxyen level ကျမကျသိချင်ရင်တော့ စက်လေးဆောင်ထားပြီးတိုင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ Oxygen level 95 နဲ့ အထက်ဆိုရင်ပုံမှန်ပါပဲ။ 90-92 လောက်ဆို နေသာတယ်ဆိုရုံလေးပါ။ 90 အောက်ဆိုရင်တော့မကောင်းပါဘူး။ အားလုံးပဲ အိမ်ထဲမှာကျန်းမာအောင်နေပြီး Covid19 ရန်ကင်းဝေးကြပါ‌စေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်🙏🙏🙏 ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ အတွေ့အကြုံကို ပြောပြလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။”